Haala Itiyoophiyaa Yeroo Ammaa Ilaalchisuun Ibsi Kenname
Muummicha Ministeeraa Abiy Ahimed miseensota raayyaa ittisaa waliin (suuraa faayilii)
Waajjira muummicha ministeeraa Abiy Ahimed biraa har’a tuuta oduuf ibsi kennamee jira. Akkuma kanaan muummicha ministeeraa Abiyn kan durfamu waraanni ittisa biyyaa injifannoo guddaa galmeessiseera ka jedhu ibsi kun, magaalaalee tarsiimoo kan akka Dasee fi Kombolchaa qabamuu isaa beeksisee jira.
Torbanneen lamaan darban keessa humnoonni ittisaa kan to’atan bakkaawwan tarsiimoo dabalatee injifannoon kaleessa argame garee shororkeessaaf injifatamuu hamaa dha jedha ibsichi. Humnoonni TPLF magaalaalee Affaarii fi naannoo Amaaraa erga qabatanii as qabeenyaa uummataa fi dhuunfaa irra miidhaa hamaan ga’uun illee ibsamee jira. Dhiittaan mirga namaa hamaan illee garee kanaan siivilota irratti raawwatamuu ibsi kun tuqee jira. Humnoonni ittisa biyyaa loltoota TPLF adamsuu kan itti fufan yoo ta’u hedduunis harka kennachuuf gaaffii dhiyeessan simatee jira jedha ibsi waajjira muummee ministraa biraa kenname kun.
Biyyoonni warreen dhiyaa fi dhaaboliin sadarkaa addunyaa hangi tokko dhiittaa mirga namaa guddaa naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti TPLFn raawwatameef ilaalcha kennuu dhabuun kaayyoo siyaasaa kan qabuu fi haala mirga namaa Itiyooophiyaa keessaa kan yeroo ammaa ilaalchisee ejjennoo isaan qaban sirriitti mul’isa jedha ibsichi. Walitti bu’iinsi Tigraay gara naannoo Amaaraatti babal’ate uummata 1,411,313 qe’ee irraa godaansisuun beekamee jira.
Mootummaanis uummata naannoo sanaa miliyoona lamaa ol ta’an kanneen aanaalee 24 keessaaf midhaan metric toni 28,065 ramadee jira. Yeroo hatattamaatti kan deebii kennu mootummaa waan ta’eef konkolaataan midhaan kuntaala 5,390 fe’atan jalqabaa gara Gashenaa fi Laalibalaatti ergamaniiru.
Naannoo Affaar keessaa uummanni miliyoonni 1.3 gargaarsa yeroo hatattamaa kan barbaadan yoo ta’u uummanni 376,000 qe’ee irraa buqqa’anii jiru. Balaliin gargaarsaa kan tokkummaa mootummootaa Finfinnee fi Maqalee gidduu itti fufuun illee ibsamee jira. Konkolaataan gargaarsa fe’ate 203 Maqalee dhaqqabee jira jedhamee jira. Lammiiwwan Itiyoophiyaa biyyootii alaa kanneen adda waraanaa irratti hirmaataniif galati dhiyaatee jira. Kanneen ayyaana waggaaf biyya ofiitti deebi’uu fedhaniifis waamichi darbee jira.